လမ်းဘယ်လောက်လျှောက်မှ ၀ိတ်ကျမှာလဲ? – Trend.com.mm
Posted on December 6, 2018 June 11, 2019 by Noel
လမ်းများများလျှောက်ရင် ၀ိတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖူးမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်လျှောက်ရမှာလဲ၊ဘယ်လိုလျှောက်ရမှာလဲဆိုတာတော့ သိတဲ့သူရှားပါတယ်။Gym မကစားပဲ ငါးလကြာအချိန်ထိ မကြာခဏလမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၈ကီလိုဂရမ်ထိကျနိုင်ပါတယ်တဲ့။ကဲ ဒီတော့ လမ်းလျှောက်ရင်း ဘယ်လိုဝိတ်ချကြမလဲ?
လမ်းလျှောက်ရုံနဲ့ဝိတ်ကျတယ်ဆိုပေမဲ့ ကယ်လိုရီအနည်းအများဟာ ကိုယ့်ရဲ့အလေးချိန်၊လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါသေးတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နာရီကို ၅ကီလိုမီတာ အရှိန်နှုန်းမှန်မှန်လမ်းလျှောက်ပေးတာက တစ်နာရီကို ကယ်လိုရီ ၄၀၀နီးပါးကျဆင်းစေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ၅ကီလိုမီတာထိလျှောက်ပေးဖို့မလိုပါဘူး။တစ်နာရီအတွင်း ၃ကီလိုမီတာအကွာအဝေးလျှောက်ပေးမယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ကို ကယ်လိုရီ ၃၀၀ နီးပါးကျဆင်းစေမှာပါ။ကိုယ်က လမ်းများများလျှောက်ရတဲ့သူဆိုရင် ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားပမာဏာနဲ့ချေဖျက်ပြီးသားဖြစ်လို့ ၀ိတ်လည်းအလွယ်တကူမတက်စေပါဘူး။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်ကို ခြေလှမ်းပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်မိုင်ကို ကယ်လိုရီ ၁၀၀ နီးပါး ကျပါတယ်။တစ်မိုင်က ခြေလှမ်းပေါင်း ၂၀၀၀ နဲ့ညီမျှတဲ့အတွက် လမ်းတစ်မိုင်လျှောက်တိုင်း သင့်ရဲ့ ကယ်လိုရီ ၁၀၀ ဟာကျဆင်းနေမှာပါ။ဒါပေမဲ့ တစ်ပတ်မှာ ၃၅၀၀ ကယ်လိုရီကျဆင်းစေဖို့အတွက်တော့ သင့်အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို ခြေလှမ်းပေါင်း ၁၀၀၀၀ လျှောက်ဖို့လိုပါတယ်။ခြေလှမ်းပေါင်း ၁၀၀၀၀ စမလျှောက်ရင်တောင် အနည်းဆုံး ၅၀၀၀၀ကနေ စပြီးလျှောက်ကြည့်ပါ။
*အိမ်မှာနေလည်း ထရမှာကိုမပျင်းပါနဲ့။သေးသေးပိစိလေးတွေကအစ မပျင်းမရိထလျှောက်ပြီးယူပါ။အဲ့ဒါဆိုနောက်ပိုင်းတွေအကျင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာလည်း ရှေ့ခြေလှမ်း ၁၀၀ လောက်မှာမျက်လုံးကိုထားလျှောက်ပါ။လမ်းလျှောက်ရင်း အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းသေချာရှုရှိုက်ထုတ်ပါ။ဒါကသင့်ရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ရော ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေဖို့အတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
လမျးမြားမြားလြှောကျရငျ ၀ိတျကတြယျဆိုတဲ့စကားကိုကွားဖူးမှာပါ။ဒါပမေဲ့ ဘယျလောကျလြှောကျရမှာလဲ၊ဘယျလိုလြှောကျရမှာလဲဆိုတာတော့ သိတဲ့သူရှားပါတယျ။Gym မကစားပဲ ငါးလကွာအခြိနျထိ မကွာခဏလမျးလြှောကျပေးရုံနဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၈ကီလိုဂရမျထိကနြိုငျပါတယျတဲ့။ကဲ ဒီတော့ လမျးလြှောကျရငျး ဘယျလိုဝိတျခကြွမလဲ?
လမျးလြှောကျရုံနဲ့ဝိတျကတြယျဆိုပမေဲ့ ကယျလိုရီအနညျးအမြားဟာ ကိုယျ့ရဲ့အလေးခြိနျ၊လမျးလြှောကျတဲ့အခြိနျအတိုငျးအတာပျေါမှာလညျးမူတညျနပေါသေးတယျ။ပုံမှနျအားဖွငျ့ တဈနာရီကို ၅ကီလိုမီတာ အရှိနျနှုနျးမှနျမှနျလမျးလြှောကျပေးတာက တဈနာရီကို ကယျလိုရီ ၄ဝဝနီးပါးကဆြငျးစပေါတယျ။ဒါပမေဲ့ ၅ကီလိုမီတာထိလြှောကျပေးဖို့မလိုပါဘူး။တဈနာရီအတှငျး ၃ကီလိုမီတာအကှာအဝေးလြှောကျပေးမယျဆိုရငျ တဈရကျကို ကယျလိုရီ ၃၀၀ နီးပါးကဆြငျးစမှောပါ။ကိုယျက လမျးမြားမြားလြှောကျရတဲ့သူဆိုရငျ ကိုယျစားလိုကျတဲ့အစားပမာဏာနဲ့ခဖြေကျြပွီးသားဖွဈလို့ ၀ိတျလညျးအလှယျတကူမတကျစပေါဘူး။
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ လူတဈယောကျဟာ တဈရကျကို ခွလှေမျးပေါငျး ၂၀၀၀ လောကျလြှောကျဖို့လိုအပျပါတယျ။တဈမိုငျကို ကယျလိုရီ ၁၀၀ နီးပါး ကပြါတယျ။တဈမိုငျက ခွလှေမျးပေါငျး ၂၀၀၀ နဲ့ညီမြှတဲ့အတှကျ လမျးတဈမိုငျလြှောကျတိုငျး သငျ့ရဲ့ ကယျလိုရီ ၁၀၀ ဟာကဆြငျးနမှောပါ။ဒါပမေဲ့ တဈပတျမှာ ၃၅၀၀ ကယျလိုရီကဆြငျးစဖေို့အတှကျတော့ သငျ့အနနေဲ့ တဈနကေို့ ခွလှေမျးပေါငျး ၁၀၀၀၀ လြှောကျဖို့လိုပါတယျ။ခွလှေမျးပေါငျး ၁၀၀၀၀ စမလြှောကျရငျတောငျ အနညျးဆုံး ၅ဝဝဝဝကနေ စပွီးလြှောကျကွညျ့ပါ။
*အိမျမှာနလေညျး ထရမှာကိုမပငျြးပါနဲ့။သေးသေးပိစိလေးတှကေအစ မပငျြးမရိထလြှောကျပွီးယူပါ။အဲ့ဒါဆိုနောကျပိုငျးတှအေကငျြ့ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
လမျးလြှောကျတဲ့အခါမှာလညျး ကိုယျအလေးခြိနျကဆြငျးစဖေို့ ရှခွေ့လှေမျး ၁၀၀ လောကျမှာမကျြလုံးကိုထားလြှောကျပါ။လမျးလြှောကျရငျး အသကျကို ဖွညျးဖွညျးခငျြးသခြောရှုရှိုကျထုတျပါ။ဒါကသငျ့ရဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်အချိန်ဟာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလဲ ?
“The New York Times” သတင်းစာကနေ ဖော်ပြခံရတဲ့ မင်းသား Yoo Ah In